Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo(Last Updated On: 07/02/2021)
Xaqiiqdaas waxaa u dheer, isbedelka muuqaalka xilliyeed, ka dhig harada Qinghai mid aan caadi ahayn oo aan la mid ahayn meelaha kale ee Shiinaha. Macno ahaan waad booqan kartaa harada Qinghai xagaaga, dayrta ama gu’ga, oo aad ogaato haro gebi ahaanba ka duwan markasta.
Wixii ka badan 2,300 sano Darbiga Weyn ee Shiinaha ayaa xukuma muuqaalka Waqooyiga Shiinaha, waana qodobka ugu xiisaha badan safar kasta oo lagu tago Shiinaha. Nasiib darro, sanadihii la soo dhaafay nabaad-guurka dabiiciga ah iyo dhaawaca aadanaha - 2,000 kiiloomitir ayaa ka dhammaaday astaamahan muuqda.
Habka ugu wanaagsan ee loogu safro harada Qiandao waa iyadoo tareenka laga raaco Hangzhou ilaa Saldhigga Qiandaohu ka dibna tagsi loo raaco Harada Qiandao.